October 20, 2020 - Factcrescendo Myanmar
October 20, 2020 October 20, 2020 Lynn YuLeaveaComment on Fact Check: AAခေါင်းဆောင်နဲ့ တပ်မတော်ကာ/ချုပ်ဇနီးနဲ့ မောင်နှမဝမ်းကွဲ တော်စပ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းအမှား
ရက္ခိုင့်တပ်တော် AAခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်နဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှနဲ့ မောင်နှမဝမ်းကွဲတော်စပ်တယ်ဆိုပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ပို့စ်တင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာ “သင့်သိပါသလာ ကာချုပ်မိန်မနဲ. ရခိုင်သူပုန်း ခေါင်ဆောင်ထွန်မြက်နိုင်ဟာ မောင်နှမဝမ်းကွဲတော်တယ်ဆိုတာ”လို့ ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီလိုရေးသားမျှဝေချက်တွေဟာမှားယွင်းတာကို Fact Crescendo Myanmar ကတွေ့ရှိရပါတယ်။ မူရင်းလင့်ခ် – FB Link | Archive Link အချက်အလက်စိစစ်ချက် ဒီလိုရေးသားထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆန်းစစ်မယ်ဆိုရင် ဒေါ်ကြူကြူလှက ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့ သံတွဲမြို့ဇာတိဖြစ်ပြီး AAခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဒေသဖြစ်တဲ့ စစ်တွေမြို့ဇာတိဖြစ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ Fact Crescendo Myanmarက တိုင်းရင်းသားအရေးလေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးမောင်မောင်စိုးကို ဖုန်းနဲ့ ဆက််သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့ “မတော်လောက်ဘူးထင်တယ်၊ သံတွဲနဲ့ စစ်တွေဆိုတော့၊ သတင်းအမှားဖြစ်မှာပါ၊ အဲ့လို့သတင်းအမှား ကျွန်တော်ထင်တယ် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်တော့ ရှိပြီထင်တယ်၊ ဒေါ်ကြူကြူလှက AAကိုထောက်ပံ့လို့ ဖမ်းသွားပြီဆိုတာမျိုးတွေပေါ့၊ […]
ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စိုက်ထူတဲ့ NLD ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုရဲ့ စာသားတွင် ဒီဂျစ်တယ်နည်းလမ်းအသုံးပြုပြီး ပြောင်းလဲရေးသားထားတဲ့ ပို့စ်တစ်ခု လူမှုကွန်ယက်မှာ သတင်းမှားဖြန့်ဝေလျှက်ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုပျံ့နှံ့လျက်ရှိတဲ့ပို့စ် ဓာတ်ပုံထဲက စာသားမှာ “လူကို ခွေးလိုအုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရမျိုးရဖို့ NLD ကိုမဲပေးစို့”လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီဓာတ်ပုံနဲ့အတူ “ကျွန်သဘောက်မကြီး SHOWလိုက်ပါအုံး အမေ့သားတွေနော် ဘာမှတ်လည်း #ဖျားသွားမယ် #လူညံ့တွေတင်မြှောက်လိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာ ခေါင်းဆောင်မဖြစ်ပဲ #လူညံ့ဦးဆောင်သူအဖြစ်သာတွေ့ရမှာ *ဆိုင်းဘုတ်သက်သေ* !:.” $%& /? *ဆောင်*တော့တူပါရဲ့ *ခေါင်းနဲ့ ဦး*ကွာသွားတာ”လို့ “Aung Htun Linn”အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်အသုံးပြုသူက အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်က အောက်ပါအတိုင်း မျှဝေထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာလည်း အလားတူဓာတ်ပုံကို မျှဝေထားပါတယ်။ မူရင်းလင်ခ့် – Fb link | Archive link အချက်အလက်စိစစ်ချက် […]
October 20, 2020 October 20, 2020 နေရာမောင်LeaveaComment on Fact Check: တကျော့ပြန်လာတဲ့ ဂျိုးဖစ်ရှာနဲ့ NLD သတင်းမှား
ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲလိမ်လည်ဖို့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ထောက် ဂျိုးဖစ်ရှာကလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ပို့စ်တစ်ခု လူမှုကွန်ယက်မှာပျံ့နှံ့လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပျံ့နှံ့လျက်ရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံပို့စ်မှာ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအလိုက် USDP၊ NLD နဲ့တိုင်းရင်းသားအစုအဖွဲ့တွေရဲ့ ထောက်ခံမှုရာခိုင်နှုန်းများနှင့်အတူ “UEC နဲ့ပေါင်းပြီးမဲလိမ်ဖို့ ကွပ်ကဲနေတဲ့ ဒေါ်စုလက်ထောက် MI-6 ထောက်လှမ်းရေး ဂျိုးဖစ်ရှာဆီပို့လိုက်ပါပြီ”၊ ““ရှုံးမဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်7ခုလုံးမှာ COVD; မငြိမ်းချမ်းနယ်မြေ သတ်မှတ်ပြီး ပယ်ဖျက်ပါတော့မယ်”စတဲ့ ပြောဆိုရေးသားချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီလိုရေးသားမျှဝေချက်တွေဟာမှားယွင်းတာကို Fact Crescendo Myanmar ကတွေ့ရှိရပါတယ်။ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူတွေက ၁ ထောင်ကျော်က ပြန်လည်မျှဝေထားတဲ့ ပို့စ်ကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရ ပါတယ်။ မူရင်းလင့်ခ် – Fb link | Archive link အချက်အလက်စိစစ်ချက် ဒီလိုရေးသားမျှ ဝေနေတဲ့ပို့စ်ဟာ အထောက်အထားတစ်စုံတစ်ရာအပေါ်မှာအခြေခံထားခြင်းမရှိပါဘူး။ အခုလိုမျှဝေထားတဲ့ပို့စ်မှာ ဘာတွေမှားယွင်းနေသလဲကြည့်ရအောင်ပါ။ […]